Politika momba ny tsiambaratelo ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
1.1 Fandefasana sy firaketana angon-drakitra ankapobeny
2 Ny mahamarina sy ny marina ny data
3 Fampiasana ny zon'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana na fanoherana
4 Ny fanekena sy ny fanekena
5 Ny fanovana ny politikam-piainan'ny fiainana manokana
6 Mailaka ara-barotra
Ny fandefasana angona manokana amin'ity tranokala ity dia tsy maintsy atao raha te hifandray, hanome hevitra, hisoratra anarana amin'ilay bilaogy find.online, hanao fifanarahana amin'ireo serivisy aseho eto amin'ity tranonkala ity ary hividy ireo boky amin'ny endrika nomerika.
Discover.online dia hanangona ny data manokana momba ny mpampiasa, amin'ny alàlan'ny endrika an-tserasera, amin'ny alàlan'ny Internet. Ny angona manokana voangona, arakaraka ny tranga tsirairay, dia mety ho, ankoatry ny hafa: anarana, anarana, anarana mailaka ary fidirana fidirana. Toy izany koa, amin'ny raharaha serivisy fifanarahana, fividianana boky sy dokam-barotra, dia hanontany ny mpampiasa momba ny angona banky na fandoavam-bola sasany aho
Rafitra hanangonana ny mombamomba anao ampiasain'ny Discover.online :
Azon'ny mpampiasa atao unsubscribe amin'ny fotoana rehetra ny serivisy omena amin'ny alàlan'ny fikarohana.norohy ity Gazety ity ihany.
Ny Discover.online dia mandalina ihany koa ny safidin'ny mpampiasa azy, ny demografika, ny làlam-pifamoivoizany ary ny fampahalalana hafa miaraka hahafantarana tsara hoe iza ny mpihaino antsika ary inona no ilain'izy ireo. Ny fanarahana ny safidin'ny mpampiasa anay dia manampy anay hampiseho aminao ireo doka ilaina indrindra.
Ny mpampiasa ary, amin'ny ankapobeny, olona voajanahary na ara-dalàna, dia afaka manangana rohy hyperlink na fitaovana fampifandraisana (ohatra, rohy na bokotra) avy amin'ny tranonkalany mba hahitana.online (ny "Hyperlink"). Ny fametrahana ny Hyperlink dia tsy midika velively amin'ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'ny Discover.online sy ny tompon'ny tranonkala na ny pejin-tranonkala niorenan'ny Hyperlink, na ny fanekena na fankatoavana avy amin'ny Discover.online ny atiny na tolotra. Na izany na tsy izany, ny Discover.online dia manan-jo handrara na hanafoana ny rohy mankany amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra.
Ny mpampiasa dia manome antoka fa ny angona manokana omena amin'ny alàlan'ny endrika samihafa dia marina, ka voatery hampita ny fanovana azy. Toy izany koa, ny Mpampiasa dia manome antoka fa ny fampahalalana rehetra omena dia mifanaraka amin'ny toe-javatra misy azy ireo, izay nohavaozina sy marina. Ho fanampin'izany, ny mpampiasa dia manolo-tena hitazona ny angon-drakitra fanavaozany amin'ny fotoana rehetra, tompon'andraikitra amin'ny tsy fahatomombanana na ny lainga amin'ireo angon-drakitra omena sy ireo fahasimbana mety haterak'izany amin'ny Online Servicios Telemáticos SL amin'ny maha tompon'ny tranonkala Discover.online.
Azonao atao ny mitarika ny serasera sy mampihatra ny zon'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana sy fanoherana Amin'ny alàlan'ny paositra any amin'ny C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) na amin'ny e-mail: info (at) Discover.online miaraka amin'ny porofo manan-kery amin'ny lalàna, toy ny photocopy an'ny DNI na mitovy aminy, izay manondro ny lohahevitra "PROTECTION DATA".
Ny mpampiasa dia nanambara fa efa nampahafantarina azy ireo ny fepetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny fanekena sy ny fanekena ny fitsaboana an'izany amin'ny Online servicios Telemáticos SL amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza ao amin'ny fanamarihana ara-dalàna.
Mifanaraka amin'ny LSSICE, Online servicios Telemáticos SL dia tsy manao fanao SPAM, noho izany dia tsy mandefa mailaka ara-barotra izay mbola tsy nangatahana na nomen'ny Mpampiasa alàlana, amin'ny fotoana sasany, dia afaka mandefa fampiroboroboana manokana sy tolotra manokana ary antoko fahatelo, amin'ny tranga izay ahazoanao manome alalana ireo mpandray. Vokatr'izany, isaky ny endrika atolotra ao amin'ny tranokala, ny mpampiasa dia afaka manome alalana mazava azy ireo handray ny "Gazetiko", na inona na inona fampahalalana momba ny varotra nangatahina manokana. Azonao atao ihany koa ny manafoana ny famandrihanao mandeha ho azy ao amin'ireo Gazety iray ihany.